खानामा छुटाउन हुन्न चोकर भएका खाना, यी हुन भान्साका चोकरयुक्त खानाहरु - यादका टुक्रा
खानामा छुटाउन हुन्न चोकर भएका खाना, यी हुन भान्साका चोकरयुक्त खानाहरु
1 month ago 1015 Views
मैदाको विकल्प हो, आटा । मैदालाई मन्द विष भनिन्छ , जो एकदमै अस्वस्थ्यकर हुन्छ पनि । त्यसैले रोटी खानुहोस् वा पराठा, आटा सर्वोत्तम हुन्छ । यो बजारमा सहजै उपलब्ध हुन्छ पनि । यद्यपी चोकरयुक्त आटा सेवन गर्नुपर्छ, जो स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । के छ त यसको फाइदा ?
१. शोधकर्ताका अनुसार चोकरले रगतमा इम्यूनोग्लोब्यूलीन्सको मात्रा बढाउँछ, जो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन उपयोगी हुन्छ । यसले टिबी जस्ता खतरनाक रोगबाट लड्ने ताकत समेत दिन्छ । २. पाइल्सको समस्या छ भने चोकरयुक्त आटा सेवन गर्नुहोस् । यो आन्द्रा तथा मलाशयको क्यान्सरबाट बचाउन पनि उपयोगी मानिएको छ । चोकरयुक्त आटाले पेट सफा राख्छ ।
३. फाइबरले भरपुर हुने भएकाले चोकरयुक्त आटाको प्रयोग पाचन सम्बन्धी कुनैपनि समस्या हटाउन लाभदायक हुन्छ । यसले कब्जियतको समस्याबाट समेत छुटकारा दिलाउँछ । ४. चोकरयुक्त आटाको प्रयोग कोलेस्ट्रोल क मगर्नका लागि पनि उपयोगी मानिन्छ । जसलाई मोटोपनको समस्या छ, हृदय रोग छ, उनीहरुले चोकरयुक्त आटा सेवन गर्नुपर्छ । ५. तपाई प्रकृतिक रुपमा आफ्नो तौल घटाउन चाहनुहुन्छ ? त्यसो हो भने तपाईका लागि चोकरयुक्त आटा उपयोगी हुनसक्छ । यसको सेवनले तौल नियन्त्रण राख्न मद्दत मिल्छ ।
मैदा भर्सेस आटा : पौष्टिताको सन्दर्भमा आटा सर्बोत्तम हो । मैदा पनि आटाबाटै बन्छ । आटालाई मैदा बनाउने प्रक्रियामा १० प्रतिशत क्यालोरी बढ्छ । आटामा रहेका केहि पौष्टिक पदार्थ पनि हट्छ । लगभग ६६ प्रतिशत भिटामिन बि, ७० प्रतिशत मिनरल, ७९ प्रतिशत फाइवर र १९ प्रतिशत प्रोटिन पनि नष्ट हुन्छ । मैदामा बेकिङ प्रयोग हुन्छ । त्यसैले मैदाको परिकार सेवन गर्नुभन्दा आटा उत्तम हुन्छ । अहिले कतिपय परिकार त आटाबाटै तयार गरिन्छ
Don't Miss it यी खानेकुराका बियाँहरु वास्तै नगरी फ्याल्ने हो भने मुर्ख हुम् हामी
Up Next यी फलफूलहरु सँगसँगै खानु हुदैन, ज्यानै पनि जान सक्छ,
4 weeks ago 939 Views
1 month ago 686 Views
1 month ago 384 Views
हाम्रो खानामा आलु सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने तरकारीमा पर्छ । त्यसैले आलुलाई तरकारीको राजा पनि भनिन्छ । तर, हामीमध्ये धेरैले…
9 months ago 3191 Views
किन बन्ने शाकाहारी भन्छ कसैले भने यो पढ् भन्दिनु, सबै कारण सहित जानकारी
खानपानको सवालमा मांसहार र शाकाहारलाई दुई कित्तामा विभाजन गरिएको छ । अक्सर स्वादका पछाडि दौडनेहरु मांसहार भोजन नै रुचाउँछन् ।…
7 months ago 981 Views
साथीसँग लभ पर्यो भने यस्तो हुन्छ, फाइदा बेफाइदाको लेखाजोखा
मानिसको जीवनमा हरेक सम्बन्धको आफ्नै महत्व र मान्यता हुन्छ । यी सम्बन्धहरु कति रगतका हुन्छन् भने कति मनका । मनको…
8 months ago 285 Views